c++ ကို run လို့ရဘူး - MYSTERY ZILLION
c++ ကို run လို့ရဘူး
October 2010 edited October 2010 in C++
ကျွန်တော် c++ ကို run တာ run လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် VC++ express edition ကိုသုံးတယ်။ file>>new>>file>>C++ sourcefile ကိုရွေးတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော် အောက်က code line တွေ ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်
cout<<"Hello! This is my first program"<<endl;
ရိုက်လို့ပြီ:သွားရော run မယ်ဆိုလို့ F5 ကီးနှိပ်တာ မရဘူး။ ဒါနဲ့ ကြည့်လိုက်ရော debug button လေးက မှိန်နေတယ်။အဲဒါဘာလုပ်ရမလဲ။
Use File>>New>>Project>>Win32>>Win32 Console Application.
after #include <iostream>
thank thank you very much! ok တယ်အစ်ကို